खाना खाने बित्तिकै के गर्ने के नगर्ने ?::देश र जनताप्रति समर्पित
खाना खाने बित्तिकै के गर्ने के नगर्ने ?
आम मानिस खाना खानुलाई खाने काम सक्नु हो जस्तो मात्र ठान्छन् । अरु बेला आआफ्ना पेशा व्यवसाय अनुसारका व्यस्तता सबैका हुन्छन् तर खानेबेलामा सबै कुरा बिर्सेर आरामसँग खाने पिउने अनि विश्रामपछि मात्र काममा लाग्ने हो । तर मानिसहरुको स्वभाव नजिकबाट नियाल्दा यस्तो देखिन्छ कि उ अरु कुरा आरामसँग गरेर हतारमा खानपिन गरिरहेको छ । कतिपयको बानी त कस्तोसम्म देखिन्छ भने उ यसरी खाईपिई रहेको छ कि उसको गाडी छुट्नै लागेको छ ।
योग र आध्यात्मका जानकार मानिसहरु विशेष गरेर खानापान सकेपछि केहीबेर बज्राशनमा बस्छन् जसले खाना पचाउन र मष्तिष्कमा सन्तुलित रक्तप्रवाहमा समेत राम्रो प्रभाप पर्ने उनीहरुको अनुुभव सुनिन्छ ।
स्वास्थ्य विशेषज्ञहरू पनि खाना खाएपछि केहीबेर आराम गर्नुपर्ने सल्लाह दिन्छन् । खाना खानेबित्तिकै पेटलाई असर पर्ने काम गरियो भने पाचन प्रक्रियामा नकारात्मक असर पर्छ भन्ने उनीहरुको सुझाव छ। उनीहरुले खाना खानेबित्तिकै आराम नगर्ने मानिसको स्वास्थ्यहितका लागि केही उपाय अपनाउन सुझाएका छन् । ती यस्ता छन्:
खाना खाईसक्ने बित्तिकै कुनैपनि पुस्तक या पत्रपत्रिका पनि पढ्नु हानीकारक नै मानिन्छ । खाने बित्तिकै रक्तसंचार सही ठाउँमा बसिनसकी शरीर र मष्तिष्कमा बोझ पर्ने काम नगर्न विज्ञहरुले सुझाएका छन् । (स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न स्रोतबाट अनुवादित)
यौन शिक्षाबारे विद्यार्थीको उत्तर पढेर शिक्षकनै बेहोस
उपचार खर्च तिर्न नसक्दा बी एन्ड सी अस्पतालले विरामीलाई बन्धक
…सम्पर्क कसरी अति सुखद बनाउने ?
पत्रिकामा खानेकुरा खाँदा क्यान्सर हुनसक्छ